Xarun Masiixi Cusub oo Laga Furay Jijiga – Rasaasa News
Xarun Masiixi Cusub oo Laga Furay Jijiga
Jijiga, May 01, 2014 – Xarun lagu hanuuniyo dadka doonaya in ay qaataan diinta Masiixiga oo ay leeyihiin dad Somali ah ayaa dhawaan laga furay magaalada Jijiga. Xaruntan ayaan wali magaceeda la shaacin, laakiin ku shaqaysa magaca Walaalaha Somalida Qurbaha.
Xaruntan oo ah tii ugu horaysay ee nooceeda oo laga hirgaliyo dhul Somali leedahay, ayay hirgaliyeen Masiixiyiin Somali ah. Dadka hirgaliyey xaruntan cusub waxay ka kala yimaadeen Yurub, North America iyo Kenya.
Hayadda xaruntan furtay ayaa lagu sheegay in ay haysato firqada Protestant, taas oo Kharashka lagu maamulo hawlaha xaruntu qabato ay bixiso Kaniisad ku taal Nairobi.
Tirada maamulayaasha iyo dadka ku xidhan xaruntan midna lama yaqaan, laakiin waxaa la ogyahay in qaar ka mida maamulayaasha xarunta ay ka yimaadeen Denmark iyo the Netherlands.
Furitaanka xarunta cusub waxaa sababay isbadalka ka jira degaanka Somalida, kaas o ay maamulayaasha xaruntani kaga faa,iidaysanayaan madaxda degaanka.
Atoobiya waxaa laggaga dhaqmaa mad-habta Orthodox, oo dalal yari ay haystaan, laakiin waxaa sanooyinkan ku soo badanayay dad haysta mad-habo kale oo ka mid ah diinta Masiixiga.
Baylahda ka jirta degaanka Somalida, waxaa kordhay saddexdii sano ee ugu dambeeyey xarumaha Masiixiga ee laga furayo degaanka Somalida kuwaas oo ay wado hayadda Franciscan Mission Outreach
Sanooyinkan dambe waxaa Somalida ku soo badanayey dhalinyarada qaadanaysa diinta masiixiga, taas oo ay sababayso dhaqaale doonimo. Waxayna arintani aad ugu badnayd dalka Kenya, xaruntan cuub ee laga furay Jijiga ayaa noqon doonta saldhig ku fida dhamaan degaanada Somalida.
Dhagayso Dhaanto Maxiixi ah, Kaniisada Jijiga
DDS oo Shir Beeleed ku Qabatay San-Xaskule
San-Xaskule: Beesha MaalinGuur oo Cabdi ka Codsatay Ceelal iyo Ciyaalka